IHTC U12 Plus sele ifumana uhlaziyo olutsha | I-Androidsis
I-HTC ikhupha uhlaziyo olutsha olujolise kwifowuni yalo yomzuzu, i I-HTC U12 Plus. Esi sixhobo, esasungulwa ngoMeyi, sele sisonwabela ukuphuculwa okutsha kokuzimela kunye nokusebenza ngokubanzi.
Iphakheji yokuphucula iza ne-CryptoKitties, Umdlalo obonakalayo apho sinokusebenzisa i-Ether njengemali yokuzala, ukuthengisa kunye nokuqokelela iikati ezibonakalayo. Oku kuphantsi kwe-Ethereum blockchain, yesibini eyedatha eyaziwayo emva kweBitcoin. Fumanisa ukuba ingantoni!
Uhlaziyo luqale ukufikelela kwabanye abasebenzisi baseHong Kong, ngokweengxelo ezahlukeneyo. Enjalo Iza phantsi kwenguqulelo 1.25.708.3 kwaye inobunzima be-136,63 MB. Ngayo, ibhetri isinika ukuzimela okukhulu ukukhathazeka kancinci kwitshaja kunye nokusebenza ngokubanzi kwesiphelo kuphuculwe kumacandelo aliqela: imultimedia, iiapps ezisebenzayo, imidlalo, phakathi kwabanye.
Kwelinye icala, inkampani ibhengeze ukuba, ngohlaziyo, Itekhnoloji ye-Edge Sense yeselfowuni ilungisiwe. Ngenxa yoku, uvakalelo lweqhosha le-U12 + liphendula ngcono kunangaphambili.
I-CryptoKitties, umdlalo omnandi kunye nothandwayo uza kwi-HTC U12 Plus
Abasebenzisi esele bahlaziye ifowuni banayo le nto ubhetyebhetye kwaye umdlalo ohlekisayo. Kwii-CryptoKitties esinokukhathalela, ukuthengisa, ukuthenga, ukuqokelela kunye nokukhetha kwiikati ezininzi ezikhoyo kwivenkile yomdlalo. Zonke ziphantsi kwenkqubo yokuhlawula i-Ethereum.
Umdlalo usekelwe kwinkqubo ye-blockchain, eyaziwa ngokuba yi-blockchain, ke inikezelwa njengotyalo-mali olunomdla kakhulu nolunomdla ukuba ufuna ukungena kwihlabathi le-Ethereum. Ukuba akunjalo, singasoloko siyisebenzisa ukuze sonwabe kwaye sihlale.
Okokugqibela, ngokubhekisele kulwabiwo lo hlaziyo, kuyakufuneka silinde ngomonde de lufike kwisixhobo sethu, njengoko inkampani ingakhange ithethe nto malunga nokuba iza kukhawuleza kangakanani kwaye iza kusasazeka njani kwihlabathi jikelele.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-HTC U12 + iqala ukuba nohlaziyo olutsha ngophuculo oluninzi kunye nee-CryptoKitties